सिसिक्यामेराको सहयोगमा रातभर अनुसन्धान गर्‍यौँ, तीनवटा गेस्टहाउसमा लगेर नौजनाले बलात्कार गरेको पत्ता लाग्यो
२०७८ पौष १५ बिहीबार ०७:००:००
एसएसपी सुदीप गिरी प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं
नयाँ बसपार्क भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाको जानकारी प्रहरीले कसरी पाएको थियो ?
मंगलबार दिउँसो करिब ३ बजेतिर हामीलाई घटनाको जानकारी आएको हो । एक महिलाले आफूलाई ८–१० जनाले बलात्कार गरेको भनेर उजुरी दिनुभएको थियो । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक थिएन । तत्कालै हामीले उहाँलाई अस्पताल पुर्‍याएर अनुसन्धान सुरु गर्‍यौँ ।
नौजना अभियुक्तसम्म प्रहरी कसरी पुग्यो ?
चिकित्सकसँग महिलाको अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि हामीले पीडितसँग घटनाबारे थोरै जानकारी लियौँ । तर, पीडितलाई घटना भएको होटेलको नामसमेत थाहा थिएन । कसैसँग चिनजान पनि थिएन । शून्यबाट हामीले अनुसन्धान सुरु गर्‍यौँ ।
पीडितले दिएको जानकारीका आधारमा गोंगबुको मित्रनगर पुग्यौँ, जहाँ हामीले सिसिक्यामेराको सहयोगमा शतप्रतिशत अनुसन्धान थाल्यौँ । पीडितसँगै हिँडिरहेको अवस्थामा देखिएका युवालाई सिसिक्यामेरामा पछ्याउँदै जाँदा होटेल पत्ता लाग्यो र त्यहाँ बसेका व्यक्तिमाथि रातभरि अनुसन्धान गर्‍याैँ । त्यसकै आधारमा हामी नौजना नै अभियुक्तसम्म पुग्यौँ । पछि थप सिसिक्यामेरामा हेर्दा अन्य होटेलमा लगेर पनि जबर्जस्ती करणी गरिएको देखियो । जसका आधारमा करिब २४ घन्टाभित्रै नौजना अभियुक्तलाई नै पक्राउ गर्न सफल भएका हौँ ।
पक्राउ परेका आरोपीले अभियोग स्वीकार गरेका छन् ?
पीडितको स्वास्थ्यमा केही सुधार भएकाले हामीले प्रहरी कार्यालय ल्याएर आरोपी पहिचान गर्न लगाएका थियौँ । उहाँले नौजनाकै सनाखत गर्नुभएको छ । पक्राउ परेका आरोपीले पनि स्वीकार गरेका छन् । तीनवटा फरक–फरक ठाउँमा नौजनाले बलात्कार गरेको देखिन्छ । सबै पक्राउ परेकाले थप अनुसन्धान सुरु गर्दै छौँ ।
नयाँ बसपार्कजस्तो व्यस्त ठाउँमा नौजनाबाट सामूहिक बलात्कार हुँदा पनि होटेल सञ्चालकले किन थाहा पाएनन् ?
यसमा गेस्टहाउस सञ्चालकहरूको पनि कमजोरी देखिएको छ । एउटा कोठामा ५–६ जना पुरुष र एउटा महिला हुन्छन् र शंकास्पद गतिविधि हुन्छ भने उसले प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन । यसमा होटेल र गेस्टहाउस सञ्चालकलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछौँ ।
देशको राजधानीमा महिलामाथि नौजनाबाट सामूहिक बलात्कार हुन्छ, यसले देशमा महिला कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाएन र ?
यो साह्रै दुःखद र त्रासद घटना हो, तर राजधानी असुरक्षित भयो भन्न मिल्दैन । हामी २४ घन्टाभित्रै आरोपीलाई पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ । महिलामाथि हुने यस्ता हिंसा न्यूनीकरणमा प्रहरी सक्रिय छ ।
आरोपीहरूको पृष्ठभूमि कस्तो छ ?
सबै वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । कोही विदेश जाने तयारीमा रहेका, कोही पासपोर्ट बनाउन आएका त कोही विदेश जाने अन्य प्रक्रियाका लागि आएका देखिन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : राजधानीमै सामूहिक बलात्कार
५७ महिनामा १० हजार १३१ बलात्कारका घटना